Ubuhle obumhlophe be-calacatta oro imabula yegolide yamathayela odonga lokugezela
Ubuhle obumhlophe be-calacatta oro imabula yegolide yamathayela odonga lokugezela
Imabula yegolide yeCalacatta (i-calacatta oro marble) ingelinye lamatshe adume kakhulu emhlabeni.Le mabula, etholakala ezindaweni eziphakeme zaseCarrara, e-Italy, inesizinda esimhlophe esinemithambo egqamile empunga nesagolide.
Izitebhisi: (900~1800)x300/320 /330/350mm
Isikhuphukeli: (900~1800)x 140/150/160/170mm
16mm, 18mm, 20mm, njll.
Ukupakisha okuqinile ngokhuni
Iphucuziwe, Ihlonishwe, Ivutha, Ibhulashisiwe noma Yenziwe ngokwezifiso
Umhlobiso waphansi noma odongeni, i-countertop, i-vanity top, njll.
Imabula yegolide yeCalacatta (i-calacatta oro marble) ingelinye lamatshe adume kakhulu emhlabeni.Le mabula, etholakala ezindaweni eziphakeme zaseCarrara, e-Italy, inesizinda esimhlophe esinemithambo egqamile empunga nesagolide.Ukuhlukahluka kwayo kwemvelo kubangela umsebenzi wobuciko omangalisayo esiqeshini ngasinye.
Imabula yegolide yaseCalcutta ivame ukusetshenziswa ekuhlobiseni indlu kanokusho.I-Precut kitchen island countertops kanye ne-interior wall cladding.I-Calacatta gold bookmatch iyisici esidume kakhulu.Amathayela emabula egolide e-calacatta ahlotshiswe ngendlu yokugezela enamathe kakhulu ongayicabanga.
I-Rising Soure Group ingumkhiqizi kanye nomthengisi, okhethekile emkhakheni wemboni yamatshe yomhlaba wonke.Sinezinketho eziningi zempahla yamatshe kanye nesixazululo sokumisa okukodwa & nesevisi yamaphrojekthi wemabula namatshe.
Imikhiqizo eyinhloko: I-Marble/Granite/Onyx/Agate Slab, Marble Mosaic, Sintered Stone, Terrazzo Tile, njll.
Amathayili e-marble apakishwe ngqo kumakhreyithi enziwe ngokhuni, asekelwa ngokuphephile ukuvikela indawo engaphezulu namachopho, kanye nokuvikela imvula nothuli.
Ama-slabs apakishwa ezinyandeni zokhuni eziqinile.
Ukupakisha kwethu kucophelela kakhulu kunabanye.
Ukupakisha kwethu kuphephe kakhulu kunabanye.
Ukupakisha kwethu kunamandla kunabanye.
Singabakhiqizi abaqondile abaqeqeshiwe bamatshe emvelo kusukela ngo-2002.
Imiphi imikhiqizo ongayinikeza?
Sinikezela ngezinto zokwakha zamatshe ezitobhini zamaphrojekthi, imabula, igwala, i-onyx, i-quartz namatshe angaphandle, sinemishini eyodwa yokwenza ama-slabs amakhulu, noma imaphi amathayela asikiwe odonga naphansi, indondo ye-waterjet, ikholomu nensika, i-skirting kanye nokubumba. , izitebhisi, iziko, umthombo, izithombe eziqoshiwe, amathayela we-mosaic, ifenisha yemabula, njll.
Yebo, sinikeza amasampula amancane mahhala angaphansi kuka-200 x 200mm futhi udinga nje ukukhokha izindleko zempahla.
Ngithengela eyami indlu, ubungako abubaningi kakhulu, kungenzeka yini ukuthi ngithenge kuwe?
yebo, siphinde sisebenzele amaklayenti amaningi endlu yangasese ngemikhiqizo yawo yamatshe.
Sithini isikhathi sokulethwa?
Ngokuvamile, uma inani lingaphansi kwesiqukathi esingu-1x20ft:
(1) ama-slabs noma ukusika amathayili, kuzothatha cishe izinsuku eziyi-10-20;
(2) Isiketi, ukubumba, i-countertop kanye neziqongo eziyize kuzothatha cishe izinsuku ezingama-20-25;
(3) indondo ye-waterjet izothatha cishe izinsuku ezingama-25-30;
(4)Ikholomu nezinsika kuzothatha cishe izinsuku ezingama-25-30;
(5) izitebhisi, iziko, umthombo kanye nokubaza kuzothatha cishe izinsuku ezingama-25-30;
Ungayiqinisekisa kanjani ikhwalithi nesicelo?
Ukushintshwa noma ukulungiswa kuzokwenziwa uma kukhona iphutha lokukhiqiza elitholakala ekukhiqizeni noma ekupakishweni.
Okwedlule: I-Italian grey veins calacatta imabula emhlophe yezindawo zokubala zasekhishini
Olandelayo: I-Italian bianco carrara imabula emhlophe yendawo yokugezela yodonga lwaphansi
Imithanjeni empunga yase-Italy i-calacatta imabula emhlophe...
I-Italian bianco carrara imabula emhlophe yendlu yokugezela...
Intengo yefekthri Ukuthungwa kwe-Italian engenamthungo
Ipulangwe lemabula elimhlophe laseChina elipholishiwe lekhithi...
Amathayela aphansi odongeni lwegumbi lokugezela Greece white volakas ...
Amatshe emvelo ase-Italy amatshe ama-arabescato ma...
I-countertop slab breccia rose calacatta viola ma...
I-Italian wood grain classico bianco white paliss...
Itshe elicwebezelayo i-ariston imabula emhlophe ye-li...
IGranite Empunga Ekhanyayo, I-Blue Granite Countertops, Amathayela Odonga Lwemabula Emhlophe, I-Granite Emnyama, I-Granite Empunga, I-Granite Ephuzi,